SAM ကို-ဗြိတိန် - ကြှနျုပျတို့အကွောငျး
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း
Taizhou Zhuoxin ပလတ်စတစ် Co. , LTD မှ
ဗီနိုင်းအဆောက်အဦပရိုဖိုင်းထုတ်ကုန်, SAM ကို-ဗြိတိန်၏စက်ရုံအမြဲဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း်ထမ်းဆောင်နေသည်အဖြစ် Taizhou Zhuoxin ပလတ်စတစ် Co. , LTD မှ 2007 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာလက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်လယ်ပြင်၌တစ် ပို. ပို. အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ခဲ့သည်။
SAM ကို-ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်, ကျယ်ပြန့်အတွေ့အကြုံများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး၏ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အခြားဗီနိုင်းအဆောက်အဦပရိုဖိုင်းထုတ်ကုန်နှင့်ပတ်သက်သည့်အိမ်အဆောက်အဦးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးဖြစ်ရမည်။ ဒါဟာပလပ်စတစ် extrusion စက်မှုလုပ်ငန်း၏လယ်ပြင်တွင်အထူးပြု။
SAM ကို-UK တွင်ဗီနိုင်းအဆောက်အဦထုတ်ကုန်များ၏အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, တင်ပို့ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးဖြစ်ရမည်။ ဒါဟာစသည်တို့ကို, connected picket ဦးထုပ်အဘို့, 60 ဆေးထိုးစက်များ, လမ်းကြောင်းစက်, tools တွေကို Notching နှင့် Ultrasonic စက် 8 အော်တို extrusion ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရှိပါတယ် ... SAM ကို-UK တွင်နှစ်စဉ်ရရှိနိုင်ထက်ပိုမို 8000 တန်ချိန်ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။
SAM ကို-ဗြိတိန်မှာကျနော်တို့အရည်အသွေးမြင့်မားဗီနိုင်းလောက် 72 ဒီဇိုင်းများထက်ပိုမိုအမျိုးမျိုးပေး
& သောနွားထီးတကောင်, သီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး & semi-သီးသန့်လုံခြုံရေးခြံစည်းရိုး
& သောနွားထီးတကောင်, Picket ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး
& သောနွားထီးတကောင်, မွေးမြူရေးခြံရထား
& သောနွားထီးတကောင်, ဗီနိုင်းလက်ရန်းဆိုင်ရာ
& သောနွားထီးတကောင်, ရေကူးကန်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး
& သောနွားထီးတကောင်, ဗီနိုင်းဥယျာဉ်အလှဆင်
ငါတို့ရှိသမျှသည်သင့်ရဲ့အရည်အသွေးမြင့်မားဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးကျွန်တော်တို့ကို & ndash လိုအပ်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချနိုင်; SAM ကို-UK တွင်ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုး
& သောနွားထီးတကောင်, အားလုံးဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးများအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုဈေးနှုန်း
& သောနွားထီးတကောင်, အချိန်အတွက်ပေးပို့ Make
& သောနွားထီးတကောင်, ဗီနိုင်းခြံစည်းရိုးများအတွက်အရည်အသွေးကောင်း (ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် ASTM F964 နဲ့ D1748 သတ်မှတ်ချက်နှင့်တွေ့ဆုံရန်ရသောအစိတ်အပိုင်းများကိုသုံးပါနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တသက်တာန့်အသတ်အာမခံခြင်းဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံ)
& သောနွားထီးတကောင်, 24 နာရီတွင်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု (စသည်တို့ကိုအီးမေးလ်, တယ်လီဖုန်း, Skype ကို,)
& သောနွားထီးတကောင်, One-to-One Follow-up, ဝန်ဆောင်မှု
& သောနွားထီးတကောင်, terminal Market ကအရောင်းပံ့ပိုးမှု
& သောနွားထီးတကောင်, ကွိုဆိုဖောက်သည် & rsquo; ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုတိုးတက်စေူခင်းများအတွက် s ကိုအကြံဉာဏ်
Zhuoxin စာရင်းကိုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အရာအားလုံးစိတ်ချစွာငြိမ်ဝပ်စွာနေရနိုင်